Promoting Accountability and Responsibility in Public Service နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၏ ဟောပြော ဆွေးနွေးချက်များအား ထပ်ဆင့်ဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနားကို ၁၀-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ်၌ ကျင်းပစဉ်။ | MFTB | Myanmar Foreign Trade Bank
MFTB | Myanmar Foreign Trade Bank
related websites |
Lists of MD
FX Market, Card and SWIFT Department
Exchange Control and Remittance Department
Financing and Guarantee Department
Anti-Money Laundry Department
Research, Policy and Legal Department
International Relationship & Correspondent Banking Department
Administration and Human Resource Department
Home » News » Promoting Accountability and Responsibility in Public Service နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၏ ဟောပြော ဆွေးနွေးချက်များအား ထပ်ဆင့်ဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနားကို ၁၀-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ်၌ ကျင်းပစဉ်။
Promoting Accountability and Responsibility in Public Service နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်၏ ဟောပြော ဆွေးနွေးချက်များအား ထပ်ဆင့်ဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနားကို ၁၀-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ်၌ ကျင်းပစဉ်။
Promoting Accountability and Responsibility in Public Service နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်၏ ဟောပြော ဆွေးနွေးချက်များအား ထပ်ဆင့်ဆွေးနွေးခြင်း အခမ်းအနားကို ၁၀-၇-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့နိုင်ငံခြား ကုန်သွယ်မှုဘဏ်၌ ကျင်းပစဉ်။
Address : 80-86, Mahabandoola Garden Street, Kyauktada Township, Yangon.
Phone : 195-01-380614, 380616, 250400
Fax : 095-01-254586, 095-01-385035
© 2019 MFTB, Myanma Foreign Trade Bank. All rights reserved.